निषेधाज्ञामा सडक, नालीका योजना धमाधम - नेपालबहस
निषेधाज्ञामा सडक, नालीका योजना धमाधम
| १०:०९:२५ मा प्रकाशित
२८ जेठ, बागलुङ । मर्मत अभावमा जीर्ण बनेका बागलुङ नगर क्षेत्रका सडकको सुधारलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक बोर्ड नेपाल र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा सडक मर्मत सुधारको काम भइरहेको हो ।
निषेधाज्ञाबीच पहिलो चरणमा सदरमुकामभित्रका सडकमा काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र १४ वटै वडाका पक्की सडकमा मर्मत सुधारको काम हुने इञ्जीनियर मनोज शर्माले बताए।
वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले सदरमुकामका भित्री सडक, चोक सुधारले पनि गति लिएको बताउनुभयो । “वडा नं २ भित्र मात्रै झण्डै रु ५० लाख बजेटबाट यो काम हुँदैछ”, उनले भने, “कुनै सडक बोर्डअन्तर्गत कुनै वडास्तरका योजना छन् ।” यसअघि पनि सडक विस्तार, मर्मत, जीर्ण पाल, तार हटाउनेलगायत बजार व्यवस्थापनका काम गरिएको वडाध्यक्ष आचार्यले बताए ।
गत वर्ष भूपि शरेचनचोक–किरानाटोल, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसको पश्चिम गेटबाट गोल्डेनगेट चोक र वीरेन्द्र–ऐश्वर्य उद्यान आसपासको सडक चौडा पारिएको थियो । सडक विस्तारपछि घन्चमन्च सवारी गुड्ने, मोडिन नसकी बस÷ट्रक चोकमै अड्कने स्थितिबाट केही छुट्कारा मिलेको छ । सडक फराकिलो बन्दा पैदलयात्रीको आउजाउ पनि सहज उन्मुख छ । वडा नं ३ की वडाध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाबीच पनि सार्वजनिक निर्माणका काम नरोकिएको बताए । आव आखिरतिर आएकाले पनि योजनाको काम बेलैमा सक्नुपर्ने स्थिति छ । “धेरै सडक, नालीका योजना छन्, अहिले धमाधम काम भइरहेको छ”, उनले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गहतेबाट बोक्सेको खाल्डोसम्म सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उक्त योजनाका लागि रु ५० लाख बजेट छ । सडक मर्मत सुधार योजनाले वर्षेनी निरन्तरता पाएपछि बागलुङ बजारले क्रमशः मुहार फेर्दैछ । बजार व्यवस्थापन र यसको सौन्दर्यीकरणमा नगरपालिकाले लगानी बढाउँदै लगेको छ ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तह पनि यतिबेला चालु योजनाको कार्यान्वयनसँगै आउँदो आवका लागि योजना छनोटको तयारीमा जुटेका छन् । महामारीका कारण बस्तीस्तरमा पुगेर तर्जुमा गर्न नसकिने भएपछि वडा कार्यालयहरूले फोन या अरु माध्यमबाट योजना टिपाउन÷पठाउन आग्रह गरेका छन् । असार १० गते सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
टुकोनले श्रममन्त्रीलाई बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र ३ मिनेट पहिले
कोपा अमेरिका २०२१ पनि डिशहोममा प्रत्यक्ष हेर्न पाइने २८ मिनेट पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार ३५ मिनेट पहिले
सिद्धगयामा बिहानैदेखि गङ्गादशहरा स्नान गर्ने भक्तजनको भीड ८ घण्टा पहिले
निर्वाचन टुँग्गो छैन, आयुक्तहरुको सुविधा र भत्ता बढाइयो २ दिन पहिले
अवैध दोहन हुने क्रम नरोकिएपछि ‘कालीगण्डकी सभ्यता बचाऔँ अभियान’मा युवा सक्रियता ११ घण्टा पहिले
एनआईसी एशिया बैंकको स्वामित्वमा रहेको ४ लाख कित्ता शेयरमा आवेदन दिने अन्तिम दिन आज ६ दिन पहिले
आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको मानुषी लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? ३ हप्ता पहिले
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण ६ दिन पहिले
हकप्रद निष्कासनको तयारीमा रहेको राधी विद्युत शेयरमूल्यमा गिरावट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? २ हप्ता पहिले
श्रीमतीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ ४ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञामा तस्कर र शिकारी गर्नेको बिगबिगी ४ हप्ता पहिले
तिला गाउँपालिकामा आइसोलेशन सेन्टर ४ हप्ता पहिले
संसद विघटनविरुद्धको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा ३ हप्ता पहिले
छांगरु र स्याउखानीमा टेलिकमको टावर जडान हुँदै ८ महिना पहिले
पाँचखपनमा चट्याङ लागेर एक जनाको ज्यान गयो १ वर्ष पहिले
व्यानपाले नागरिकसँग मत सर्वेक्षण गरी नीति र कार्यक्रम बनाउने ७ महिना पहिले
अब चितवनमा पनि ट्राफिक जरिवाना ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भुक्तानी गर्न सकिने ४ महिना पहिले